Cool ukudla zokupheka
Kungani inhlanzi yami ethosiwe ingekho crispy?
Iqhinga lokuyilungisa ukuhambisana kwe-batter. … Uma inhlama yakho yenhlanzi ingakhisi ngokwanele uma isiphekiwe zama ukuphungula inhlama ngoketshezi oluthe xaxa. Ukushisa ngaphambili amafutha ekushiseni okufanele nakho kubaluleke kakhulu noma inhlanzi izomunca amafutha amaningi ngenkathi ipheka. …
Impendulo Esheshayo: Ungagcina isikhathi esingakanani u-anyanisi othosiwe?
Uma ugcinwe kahle, u-anyanisi ophekiwe uzohlala izinsuku ezintathu kuya kweziyi-3 esiqandisini. U-anyanisi ophekiwe ungashiywa isikhathi esingakanani ekamelweni lokushisa? Amagciwane akhula ngokushesha emazingeni okushisa aphakathi kuka-5 °F no-40 °F; u-anyanisi ophekiwe kufanele ulahlwe uma ushiywe ngaphandle amahora angaphezu kwama-140 ekamelweni lokushisa. Koze kube nini i-crispy...
Ungakwazi ukuhambisa umoya othosiwe wevemvane efriziwe?
Engeza ama-shrimp afriziwe ku-tray ye-fryer emoyeni noma kubhasikidi. Uma wenza izimfanzi zevemvane qiniseka ukuthi zikungqimba olulodwa. Pheka ku-Air Fryer ku-390 imizuzu engu-10. Khonza njengoba uthanda. Ngingakwazi ukufaka izimfanzi eziqandisiwe ku-air fryer? Uma usebenzisa izimfanzi eziqandisiwe, zibeke zonke...
Ungayisebenzisa i-Frylight ukuthosa iqanda?
Fafaza epanini lokuthosa nge-Frylight bese ubeka phezu komlilo ophakathi. Linda kuze kucace ukukhanya, uqhekeze amaqanda epanini bese upheka ngendlela othanda ngayo. Khonza nonke ndawonye futhi nijabulele. Ungakwazi ukuthosa iqanda ngamafutha esifutho? Fafaza i-skillet encane engagxili ngesifutho sokupheka. Shisisa i-skillet phezu kokushisa okuphakathi. Hlukanisa amaqanda...
Ubuzile: Ungakwazi yini ukufudumala i-stir fry?
Isitofu singenye inketho enhle yokushisa kabusha isidlo esishisayo noma noma yimiphi imifino e-sautéed. Faka amafutha bese ushisa kabusha ukudla ekushiseni okuphansi kuya kokuphakathi ukuze ugweme ukuphekwa kakhulu. Ngokuqinisekile uzofuna ukunyakazisa njalo ukuze ushise. Ungakwazi yini ukufudumala i-stir-fry ku-microwave? Ngokusho kwe-Independent kanye ne-European Food Information…
Ungawasebenzisa kangaki amafutha omifino ukuthosa okujulile?
Isincomo sethu: Ngokudla okunesinkwa nokugayiwe, phinda usebenzise amafutha kathathu noma kane. Ngezinto zokuthosa ezihlanzekile njengamashiphu amazambane, kuhle ukuphinda usebenzise uwoyela okungenani izikhathi eziyisishiyagalombili—futhi cishe isikhathi eside, ikakhulukazi uma uwugcwalisa ngamafutha amasha. Ngingaphinda ngisebenzise amafutha emifino ngemva kokuthosa okujulile? Yebo, ungaphinda uyisebenzise. Kodwa…
Uwagcina kanjani utamatisi oluhlaza othosiwe?
Uwagcina kanjani utamatisi oluhlaza othosiwe ukuthi angagxili? Uwagcina kanjani utamatisi oluhlaza othosiwe osele? Uma sezithosiwe, ngincoma ukuthi udle utamatisi ngokushesha. Kodwa-ke, uma ugcina ukudla okusele ungakugcina efrijini kuze kube yizinsuku ezintathu. Ukushisisa kabusha, beka i-oiled skillet phezu kwe-medium...
Impendulo engcono kakhulu: Ingabe ubhekeni ongaphulukisiwe udinga ukuphekwa?
Iqiniso liwukuthi wonke ubhekeni kufanele welashwe ngaphambi kokusetshenziswa. Nakuba ubhekeni ongaphulukisiwe usaphulukisiwe ubhekeni, uthola inqubo ehluke kakhulu. Inqubo engcono kuwe futhi enambitheka kakhulu! Kalula nje, ubhekeni ongaphulukisiwe ubhekeni ongakaze welashwe ngama-nitrate nama-nitrites okwenziwa ngokwenziwa. Ingabe ubhekeni ongaphulukisiwe uphekiwe? I…
Ungagula yini ngenxa yamafries aseFrance angaphekiwe?
Ingabe kulungile ukudla amafrikhi angaphekiwe? Amazambane angaphekwanga kahle awaluhlaza ngokuphelele. Amazambane anesitashi sawo ngokuvamile aphukile, kodwa hhayi ngokuphelele. Lokhu kuwenza aphephe kunamazambane aluhlaza, kodwa angaphephile ngokuphelele. Noma kunjalo, awalungile njengamazambane aphekwe ngokuphelele. Ungakwazi yini ukugula ngenxa yamazambane athosiwe afriziwe angaphekiwe? Uma…
Uyipheka kanjani i-pizza ephekwe uhhafu?
Ngiyipheka kanjani i-pizza ephekwe kancane? I-Half Phekwe I-Pizza Imiyalelo Yokupheka Preheat ihhavini ibe ngu-400-425 degrees. Faka i-pizza engakasongwa kuhhavini bese upheka cishe imizuzu engu-8-12. I-pizza kufanele yenziwe lapho ushizi uba nsundu wegolide. Uyishisa kanjani kabusha i-pizza ephekwe uhhafu? Shisisa kabusha i-Pizza kuhhavini Shisisa i-…
ikhasi1 ikhasi2 ... ikhasi883 Olandelayo →
Sanibonani nonke! NginguNinel futhi ngicabanga ukuthi abantu abathanda ukupheka, hhayi nje ukuthosa, ukubilisa kanye nomusi ngezikhathi ezithile, abakwazi ukuphila ngaphandle kokudla okumnandi. Kodwa kanjani ukulungiselela kahle izitsha okumnandi ukuze babe nempilo? Ziningi izindlela zokupheka ku-inthanethi, kodwa ngifuna ukwabelana nawe ezimbalwa.
© 2022 Ukupheka zokupheka